Sideed ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay jidka isku xira Burtinle iyo Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Shil gaari oo geystay khasaare badan ayaa shalay galab wax yar xilliga afruka ka dhacay meel ku dhow magaalada Garowe ee xarrunta gobolka Nugaal.
Labada gaari ee isku dhacay ayaa ka kala yimid Gaalkacyo iyo Garowe, waxeyna iskula dhaceen inta u dhaxeya Burtile iyo Garowe, waxaana ku dhintay ilaa 8 qof, halka 5 kale ku dhaawacmeen.
Dadka shiulkaas ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay ayaa la geeyey Isbitaalka guud ee magalada Garowe oo kuwa dhaawaca ah lagu dawyenayo.
Dadka shilkaasi gaari ku dhintay ayaa waxaa ku jira Cabdishakuur Maxamed Guray oo soo noqday Agaasimihii Hay’adda Daryeelka Bulshada, agaasimihii xafiiska xilligii uu Ra’iisul wasaaraha ahaa Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Dadka dhaawacmay sidoo kale waxaa ka mid ah wadaad lagu magacaabo Shiikh Maxamed Cabdi Qorane oo dhaawiciisu khatar aheyn.
Ismaaciil Xaashi Shirwac (Qabaal) oo ah taliyaha ciidamada nabadgelayada wadooyinka Puntland ayaa sheegay in shilkaas uu ka dhashay xawaare sare oo ay ku socdeen labada gaari iyo wadada aad ciriiri u ah oo ah 6 mitir oo kaliya sida uu yiri.
Shilalka wadooyinka ayaa kusoo laalaabta deegaanada Puntland, iyadoo arrintaas ay inta badan ka dhalato aqoon darrada wadayaasha iyo xirfadooda oo aan gaarsaneyn sidii la rabay.
Dowladda Soomaaliya oo qiratay inuusan hirgelin barnaamijkii Higsiga Cusub